सरकारी नीति ठीक भए प्लाष्टिक उद्योगले निकासी गर्न सक्छ दीपककुमार टिबडेवाल प्रबन्ध निर्देशक, पैकवेल इण्डष्ट्रिज
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ता सरकारी नीति ठीक भए प्लाष्टिक उद्योगले निकासी गर्न सक्छ दीपककुमार टिबडेवाल प्रबन्ध निर्देशक, पैकवेल इण्डष्ट्रिज
Tuesday, 31 May 2016 12:39	Rate this item
वीरगञ्जको पैकवेल इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक दीपककुमार टिबडेवाल विगत लामो समयदेखि घरायसी प्रयोजनका प्लाष्टिकका सामान उत्पादनमा सक्रिय छन् । नेपालमा प्लाष्टिक उद्योगको अधिक सम्भाव्यता भए पनि अदूरदर्शी सरकारी नीतिका कारण सम्भावना उपयोग गर्न नसकिएको प्रबन्ध निर्देशक टिबडेवालको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिवसमेत रहेका उनिसँग प्लाष्टिक उद्योगको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक गरेको संवाद :
अहिले प्लाष्टिक उद्योगको अवस्था कस्तो छ?
हिजोआज घरायसी प्रयोजनका भाँडाकुँडादेखि फर्निचरसम्म प्लाष्टिकका उत्पादनको प्रयोग हुने गरेको छ । यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा यो उद्योगको बजार सम्भाव्यता राम्रो देखिन्छ । नेपालमा १० ओटा ठूलासमेत गरी ५ दजर्नको हाराहारीमा प्लाष्टिकका सामान बनाउने उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगले लक्षित उपभोक्तालाई आआफ्नो उत्पादन आपूर्ति गरिरहेका छन् । तर, यो सम्भावनालाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा कतिपय सरकारी नीति नियम अवरोधका रूपमा देखिएका छन् ।
समस्याका कुरा उठाउनु भयो, कस्ता समस्या सामाना गर्नुभएको छ?
सबैभन्दा पहिला त विद्युत्कै समस्या छ । विद्युत् सबै उद्योगको साझा समस्या हो । प्लाष्टिक उद्योगलाई बढी विद्युत् आवश्यक पर्छ । उद्योगमा दिनको ८ घण्टा पनि नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुँदैन ।
यसले गर्दा उत्पादनका क्रममा कच्चा पदार्थ खेर जाने, उपकरण बिग्रिनेजस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ । ऊर्जा अभावमा क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन । उत्पादकत्वमा पनि असर परेको छ । विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुन नसक्नु मुख्य समस्या बनेको छ ।
सरकारी नीतिले पनि समस्या पार्‍यो भन्नुभयो, प्लाष्टिक उद्योगका लागि सरकारको नीति कस्तो पाउनुभयो?
कुनै पनि उद्योगको उन्नतिका लागि सरकारी नीति उद्योगमैत्री हुनुपर्दछ । तर, प्लाष्टिक उद्योगका सन्दर्भमा सरकारको नीति ठीक छैन । छिमेकी देशमा प्लाष्टिक उद्योगको कच्चा पदार्थमा शून्य भन्सारको सुविधा छ । चीन र बङ्गलादेशमा शून्य भन्सार छ । भारतमा भ्याट र भन्सार महशुल अत्यन्तै न्यून छ । त्यहाँ भ्याट ८ प्रतिशतमात्रै छ ।
तर, हामीकहा“ कच्चा पदार्थको आयातमा साढे ७ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर राखिएको छ । त्यसमाथि सरकारले गतवर्षदेखि उत्पादनमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यसले बजार प्रतिस्पर्धामा अत्यन्त कठिनाइ थपिएको छ ।
आयातित उत्पादनसितको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ?
भारत, चीन र बङ्गलादेशबाट भित्रिएका मालसामानसित चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको छ । ती देशमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार सहुलित र अन्य प्रोत्साहनका कारण उत्पादन लागत कम पर्छ । पछिल्लो समय बङ्गलादेशबाट प्लाष्टिकका उत्पादन आयात हुने क्रम तीव्ररूपमा बढेको छ । त्यहाँका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रको सहुलियत उपयोग गरी कम लगातमै उत्पादन गरेका कारण हाम्रो बजारमा आइपुग्दासमेत मूल्य कम पर्न जान्छ । यी कारणले गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई आयातित उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन ।
कस्तो खालको नीतिगत व्यवस्थाको अपेक्षा गर्नुभएको हो?
अन्य छिमेकी देशहरूले जस्तै हामीकहाँ पनि कच्चा पदार्थको आयातमा शून्य भन्सार सुविधा दिनुपर्दछ । सरकारले प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग निरुत्साहित गर्न भनेर त्यस्ता उद्योगमा ३ वर्षदेखि अन्तःशुल्क लगाएको छ । तर, चालू वर्षदेखि प्लाष्टिकका अन्य उत्पादनमा पनि यो कर लगाएको छ । जुन व्यावहारिक छैन । अहिले प्लाष्टिकका सामान जनजीवनको अभिन्न अङ्गजस्तै भइसकेको छ । प्लाष्टिकका झोलाको त विकल्प हुन सक्छ । तर, अन्य सामानको सहज र सुपथ विकल्प के छ ? यसकारण यो नीति नै गलत छ । प्लाष्टिकका उत्पादनमा लागू गरिएको अन्तःशुल्क खारेज हुनुपर्छ । कच्चा पदार्थ उद्योगले मात्र आयात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । व्यापारिक संस्थाले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योगलाई समस्या परेको छ ।
निकासीको सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ?
अहिले स्वदेशी बजारको करीब ६५ प्रतिशत आपूर्ति यहाँका उद्योगहरूबाट भइरहेको छ । बाँकी बजार अंश आयातित उत्पादनले लिएको छ । छिमेकी देशमा प्लाष्टिक उद्योगलाई जसरी सहुलियत दिइएको छ, त्यो प्रोत्साहन हामीले पाउने हो भने स्वदेशी बजारको बाँकी अंश पनि ओगट्न सकिन्छ । ऊर्जाको नियमित प्रबन्ध र नीतिगत प्रोत्साहन पाए स्वदेशी उद्योगले पनि छिमेकी देशमा निकासी गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । यसका लागि स्वदेशी उद्योगलाई अघि बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनु अनिवार्य छ । अभियानबाट	Read 624 times	Last modified on Tuesday, 31 May 2016 15:07	Tweet
« खबरदार ओली सरकार, फेरि नाकावन्दी गर्न नपरोस ! के भन्छन् मधेसबारे ठूला दलका मधेसी नेता ? »